Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » Safarka Mareykanka: England oo Dib u Furaysa Go'aan Xikmad Leh
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Xaqiiqdu waxay tahay inaysan jirin farqi u dhexeeya Ameerikaanka tallaalay iyo kuwa laga tallaalay Ingiriiska, Midowga Yurub iyo Kanada.
Safarka caalamiga ah waa warshad dhoofinta, iyo isu dheellitirka ganacsiga safarka taariikh ahaan wuxuu u roonaaday Mareykanka.
Xuduudaha xiran ma aysan tirtirin faafitaanka noocyada Delta.
Xiritaanka xadka oo sii socda ayaa sii daayay soo noqoshada shaqooyinka Mareykanka iyo soo kabashada dhaqaale ee weyn.
Xiriirka Safarka Mareykankan Madaxweyne kuxigeenka Fulinta ee Arimaha Bulshada iyo Siyaasada Tori Emerson Barnes ayaa soo saaray bayaankan soosocda ee ku saabsan wararka in England Waxaan dhawaan bilaabi doonaa soo dhaweynta tallaalka Mareykanka ee sida buuxda loo tallaalay:
“Hoggaamiyeyaasha dowladda Ingiriiska waxay qaateen go’aan caqli gal ah oo dib loogu furayo England si looga tallaalo dadka safarka ah ee ka yimaada Mareykanka. Waxaa la joogaa xilligii ay madaxda Mareykanka sidaas oo kale sameyn lahaayeen oo ay dejin jadwal ay dib ugu furayaan soohdimahayaga qaranka — waxaana ku dhiirrigelineynaa in ay ka bilaabaan safarada tallaalka ee ka socda Boqortooyada Ingiriiska, Midowga Yurub iyo Kanada. Xaqiiqdu waxay tahay inaanu jirin farqi u dhexeeya Ameerikaan tallaalay iyo kuwa laga tallaalay Ingiriiska, Midowga Yurub iyo Kanada.
“Safarka caalamiga ah waa warshad dhoofinta, iyo isu dheellitirka ganacsiga safarka taariikh ahaan wuxuu u roonaaday Mareykanka. Xuduudaha xiran ma aysan tirtirin faafitaanka kala duwanaanta Delta, halka xirnaanshaha xadka ay sii fogeysay soo laabashada shaqooyinka Mareykanka iyo soo kabashada dhaqaale ee weyn.
Hoggaamiyeyaasha dowladda Mareykanka waxaan leenahay: Aan dejino qorshe - hadda - sidii Ingiriiska iyo Kanadiyaanka iyo dowladaha kaleba ay sameeyeen, si loo bilaabo dib u furista safarada caalamiga.
Dhammaanteen, waxaannu leenahay: Dhegayso wicitaannada ka imanaya hay'adaha caafimaadka oo ka hel tallaal. Waa waddada ugu dhaqsaha badan ee caadi ku wada ah dhammaan. ”